अब प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिगार्ने ओलीको टिप्पणी
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ६:११
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । युवा संघ नेपालको ‘साइबर सर्कल’ घोषणा कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्डबाट कुनै काम नभएको र अब कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने बताएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
एमाले विगार्न नसकेर कांग्रेसलाई बिगार्न प्रचण्ड लागिपरेको भन्दै ओलीले भने, ‘हामीलाई बिगार्न प्रचण्डले खोजेका थिए । तर, सकेनन् । अहिले कांग्रेसमा गएका छन् । म भन्छु, होसियार कांग्रेस प्रचण्डले सिध्याउलान् ।’ कांग्रेस प्रचण्डको हात समाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले कांग्रेस विचार र नीतिमा पनि पुरानो भइसकेको बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलेजस्तो नहरेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जे भन्यो त्यही मान्ने भइसकेको ओलीले टिप्पणी गरे। बुधबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कांग्रेसलाई आफ्नो पार्टी (एमाले)सँग एक्लै चुनाव लड्न पनि चुनौती दिए।
कांग्रेस त प्रचण्डपथमा लागिसक्यो। बीपी गणेशमान, कृष्ण भट्टराईको कांग्रेस कहाँ छ, प्रचण्डले जे भने कांग्रेस त त्यही बाटोमा हिँडिसक्यो,’ ओलीले भने, ‘कांग्रेस कहाँ पुग्यो? चुनावसम्मै कायम रहन्छ भनिरहेका छन्।’ ओलीले कांग्रेस बुढो भइसकेको टिप्पणी गरे। ‘कसैसँग दम छ? पुरानो नेपाली कांग्रेसलाई सोध्न चाहन्छौं एक्लै लडने दम छ? हिजोको कांग्रेस होइन अब बुढो भइसक्यो। अरुसँग तालमेल मिलाउँदा मिलाउँदै कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन।’